Orbitcoin စျေး - အွန်လိုင်း ORB ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Orbitcoin (ORB)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Orbitcoin (ORB) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Orbitcoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $424 031.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Orbitcoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Orbitcoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
OrbitcoinORB သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.401OrbitcoinORB သို့ ယူရိုEUR€0.338OrbitcoinORB သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.306OrbitcoinORB သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.366OrbitcoinORB သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr3.6OrbitcoinORB သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.2.52OrbitcoinORB သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč8.9OrbitcoinORB သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł1.49OrbitcoinORB သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.535OrbitcoinORB သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.555OrbitcoinORB သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$9OrbitcoinORB သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$3.11OrbitcoinORB သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$2.14OrbitcoinORB သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹30.07OrbitcoinORB သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.67.71OrbitcoinORB သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.55OrbitcoinORB သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.601OrbitcoinORB သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿12.47OrbitcoinORB သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥2.79OrbitcoinORB သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥42.38OrbitcoinORB သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩475.38OrbitcoinORB သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦152.15OrbitcoinORB သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽29.42OrbitcoinORB သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴11.12
OrbitcoinORB သို့ BitcoinBTC0.00003 OrbitcoinORB သို့ EthereumETH0.00101 OrbitcoinORB သို့ LitecoinLTC0.00676 OrbitcoinORB သို့ DigitalCashDASH0.00398 OrbitcoinORB သို့ MoneroXMR0.00426 OrbitcoinORB သို့ NxtNXT28.82 OrbitcoinORB သို့ Ethereum ClassicETC0.0561 OrbitcoinORB သို့ DogecoinDOGE111.79 OrbitcoinORB သို့ ZCashZEC0.0042 OrbitcoinORB သို့ BitsharesBTS15.38 OrbitcoinORB သို့ DigiByteDGB14.49 OrbitcoinORB သို့ RippleXRP1.31 OrbitcoinORB သို့ BitcoinDarkBTCD0.0135 OrbitcoinORB သို့ PeerCoinPPC1.4 OrbitcoinORB သို့ CraigsCoinCRAIG178.96 OrbitcoinORB သို့ BitstakeXBS16.75 OrbitcoinORB သို့ PayCoinXPY6.86 OrbitcoinORB သို့ ProsperCoinPRC49.28 OrbitcoinORB သို့ YbCoinYBC0.000211 OrbitcoinORB သို့ DarkKushDANK125.93 OrbitcoinORB သို့ GiveCoinGIVE850.05 OrbitcoinORB သို့ KoboCoinKOBO88.05 OrbitcoinORB သို့ DarkTokenDT0.37 OrbitcoinORB သို့ CETUS CoinCETI1133.4
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Fri, 07 Aug 2020 01:05:03 +0000.